Nebhukadhinezari Nevakomana 4 Avo Vakateerera Mwari | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Irish Isoko Italian Kabiye Kabuverdianu Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Samoan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Telugu Thai Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Vakomana 4 Vakateerera Jehovha
Nebhukadhinezari paakatora machinda eJudha, akaita kuti jinda rake guru rainzi Ashpenazi rivachengete. Nebhukadhinezari akamuudza kuti atsvage vakomana vakagwinya uye vaiva neutano kupfuura vese pamachinda acho. Vakomana vacho vaizodzidziswa kwemakore matatu. Kudzidziswa uku kwaizoita kuti vakwanise kushanda sevakuru vakuru vehurumende yeBhabhironi. Vakomana vacho vaifanira kudzidza kuverenga, kunyora uye kutaura mutauro wechiAkkad, waishandiswa kuBhabhironi. Vaifanirawo kudya chikafu chakafanana nechaidyiwa namambo nemachinda ake. Pakati pevakasarudzwa paivawo nevakomana 4, Dhanieri, Hananiya, Mishaeri naAzariya. Ashpenazi akavapa mamwe mazita ekuBhabhironi ekuti: Bheteshazari, Shadreki, Misheki naAbhedhinego. Dzidzo yavaizowana yaizoita kuti varege kushumira Jehovha here?
Vakomana 4 ava vakanga vakatsunga kuteerera Jehovha. Vaiziva kuti vakanga vasingafaniri kudya chikafu chaidyiwa namambo nekuti Mutemo waJehovha waiti chimwe chacho chakanga chisina kuchena. Saka vakati kuna Ashpenazi: ‘Musatipa chikafu chinodyiwa namambo.’ Ashpenazi akabva avaudza kuti: ‘Kana mukasachidya uye mambo akazokuonai makaonda, anondiuraya!’
Dhanieri akafunga zano. Akaudza muchengeti wavo kuti: ‘Tipei hedu miriwo nemvura chete kwemazuva 10, mobva mazotienzanisa nevamwe vakomana vari kudya chikafu chinodyiwa namambo.’ Muchengeti wacho akabvuma.
Mazuva acho 10 paakapera, Dhanieri neshamwari dzake nhatu vakanga vaine utano hwakanaka kudarika vamwe vakomana vese. Jehovha akafara chaizvo kuti vakanga vamuteerera. Akabva atopa Dhanieri uchenjeri hwekunzwisisa zviono uye hwekududzira hope.
Vakomana vacho pavakazopedza kudzidziswa, Ashpenazi akaenda navo kuna Nebhukadhinezari. Mambo akabva ataura navo uye akaona kuti Dhanieri, Hananiya, Mishaeri naAzariya vakanga vakachenjera uye vakachangamuka kudarika vamwe vakomana vese. Akabva avasarudza vari 4 kuti vashande mumuzinda wake. Mambo aiwanzovabvunza mazano kana paine nyaya dzinokosha dzaaida kubatsirwa. Jehovha akaita kuti vave nenjere kudarika vamwe varume vese vakachenjera vamambo nevaya vaiita zvemashiripiti.
Kunyange zvazvo vakanga vasiri kunyika kwavo, Dhanieri, Hananiya, Mishaeri naAzariya havana kukanganwa kuti vaiva vanhu vaJehovha. Ucharambawo uchiyeuka Jehovha here, kunyange kana vabereki vako vasiri pedyo newe?
“Usarega munhu achikutarisira pasi nekuti uri mudiki. Asi, iva muenzaniso kune vakatendeka, pakutaura, pakuzvibata, parudo, pakutenda, patsika dzakachena.”​—1 Timoti 4:12
Mibvunzo: Unofunga kuti nei Dhanieri neshamwari dzake nhatu vakateerera Jehovha? Jehovha akavabatsira sei?
Shadreki, Misheki, naAbhedhinego vakaramba kunamata chidhori chegoridhe chamambo weBhabhironi.
Nyengetera kuna Jehovha mazuva ese sezvaiitwa naDhanieri!